Oxygen - isimo umngcele ukuphila komuntu. Ngaphandle kwayo, umzimba ungakwazi ukusinda for lungene amaminithi ambalwa - futhi yilokho kuphela uma sikhuluma ukubhukuda oqeqeshiwe noma umgijimi. Olunikeza ukuphila emoyeni sithola ku inqubo emishinini yokuphefumula. Ngaye, nemvelo kudale uhlelo eyinkimbinkimbi kakhulu kangaka. Futhi uma kukhona noma iyiphi ukwehluleka enqubeni, isibonelo, kukhona iphika, kufanele ungazinaki alamu.
Okuthile mayelana umoya
Imvamisa futhi umoya ukujula kuncike ezintweni eziningi. Okokuqala, ngobudala. Izingane ukuphefumula eziningana kunabantu abadala. Okwesibili, ngesisindo. Kukhula mass, umjikelezo kaningi okuphindaphindiwe. Okwesithathu, isimo somzimba. Ngakho, lapho esephumule zokuphefumula izinga noma umsebenzi kuthinte kwabakhulelwe abesifazane, ukucindezeleka futhi t. D.
omdala ojwayelekile kubhekwe imvamisa-12 nengu-20 ukuphefumula ukunyakaza ngomzuzu ezenziwe. Uma kukhona ngaphezulu, kungcono nakanjani ukuphefumula okusheshayo. ke luchazwa ngegama "tachypnea" imigomo kwezokwelapha. Kuphakamisa ivela khona yokushodelwa umoya egazini nge parallel ukusuka nokuqukethwe kwalo-carbon dioxide.
Odokotela yahlukanisa leli isimo ngamaqembu amabili: bokuphila, ngenxa azifele, kanye sokugembula. Kulo mBhalo, ukuphefumula okusheshayo kubonisa okuvela emzimbeni yisiphi isifo. Ngokwendlela umzimba owakheke ngayo njengoba tachypnea kungenzeka kubangelwa sithuthukiswe umsebenzi ngokomzimba noma ezimweni ezicindezelayo.
Ngakho, ukushaya kwenhliziyo okusheshayo kanye ukuphefumula kuvela uma izingxabano ukwethuka noma izinkathazo. Asikho isenzo ekhethekile ukumisa le isimo ayidingekile. Lapho umzimba uthulisa phansi, izimpawu uzonyamalala bebodwa. Ngo tachypnea sokugembula, ikakhulukazi uma lingena noma dyspnea ephelezelwa izimpawu ezengeziwe ubuhlungu zidinga ngihlolwa.
Izimpawu izinkinga zokuphefumula
Funa usizo lodokotela uma kunesidingo, uma kukhona iphika uyaphumula, kuhambisana zimpawu ezilandelayo:
iminyakazo yokuphefumula hhayi kuphela "ingxenye", kodwa ezingabalulekile. Okungukuthi, umoya kuba kufushane kakhulu futhi sihambisana efanayo umoya iDemo. Isibalo imijikelezo ngesikhathi esifanayo kungandisa ukuze 50-60 ngomzuzu. ukuphefumula njalo is engatheli. Kodwa, kungaba yingozi.
isigqi ukuphefumula kuyaphazamiseka. Izikhathi phakathi nowe abangaphumi njalo. Kungase kube ukuphazanyiswa ephefumula isikhathi esithile, ngemva kwalokho-ke kwatholakala ijubane convulsive.
Nge tachypnea njalo, uma iyekwa ingelashwa, angagcina hyperventilation. Le nkulumo ibhekisela kumuntu glut wegazi umoya-mpilo. Kulo kukhona ubuthakathaka, isiyezi, "izimpukane" emehlweni, imisipha zibe.
ukuphefumula Rapid: Izimbangela
Ngokuvamile, tachypnea kuwuphawu uhlangothi "kwansuku" izifo kunemibandela ingozi (ezinjengomkhuhlane noma sibi nezifo zokuphefumula). Kulokhu, ukuphefumula okusheshayo ephelezelwa Ukugodola, rhinitis, izinga lokushisa kuyanda, ukukhwehlela. Nokho, tachypnea futhi kungaba i-signal ukugula okungathí sina ngokwengeziwe. Ngokwesibonelo, izinkinga ngenhliziyo, ukuthuthukiswa isifuba somoya, isimiso bronchial, izimila, lactic ekuqaleni iziguli sikashukela, embolism yamaphaphu. Ngakho-ke, isikhathi eside edlulisa kufushane njalo umoya - isizathu ukuvakashelwa ekuseni eya emtholampilo.
Nezingane, isimo Kuthi ezahlukene. Ngo izinsana kwenzeka ngezinye izikhathi okuthiwa Transistor tachypnea. Ngokuvamile lokhu isimo salabo zaba khona ngenxa section caesarean noma utero kwadingeka Ukugoqa intambo. Kulokhu, kukhona njalo iphika, ngokuvamile kwesifuba nesikhumba ngenxa ukuntuleka komoya-mpilo iba cyanotic. Ukwelashelwa lokhu kungekho edingekayo. Ubuningi izinsuku ezintathu ingane lizobuya ezivamile, ngoba isici kuhlasimulise wanyamalala.
Enye into - izingane iminyaka 3-5 ubudala. Ngaphezu izifo ejwayelekile abadala, bangase baqale uphuthuma futhi izizathu "kobuntwana". Chief phakathi kwabo - engene umgudu wokuphefumula lwezinto ezincane. Uma tachypnea waqala ngokuzumayo, simi ngokushesha shayela "ambulensi." Eyesibili, asikho isizathu kancane esiyingozi - epiglottitis, okungukuthi ukuvuvukala epiglottis. Abadala akuvamile uhlushwa kubo, kodwa izingane kuvamile impela. Kulokhu, udinga ukuqinisekisa ingane yakho ukuphumula. Akunakwenzeka ukuvakashela odokotela ukushintsha isikhundla sokuba inhloko yakhe futhi ozama ukuwufeza ukuzihlola.
Yini amaphepha ingilazi asetshenziswa?
Evulekile Suv Nissan Armada. Uhlolojikelele